Zvemakwikwi makwikwi uye otomatiki kudzidziswa kuwanikwa kweApple Watch | Ndinobva mac
Mushure mejug yemvura inotonhora inotorwa nevashandisi veApple Watch Series 0 (yekutanga modhi) nesu mushure mekunzwa nhau kuti izvi haugamuchire vhezheni itsva watchOS 5 kubva kuApple, isu tinofanirwa kutaura nezve akati wandei ekuvandudza ayo akaitwa mune ino vhezheni kune mamwe emamwe mamodheru.
Nhasi uno unoenderanawo nenhau dzakanaka dzevashandisi ve Mexico, Brazil, South Korea uye iyo UAE ichaona kusvika kweiyo Series 3 LTE modhi svondo rinouya. Apple inoronga kuvhura iyi modhi kwavari mumaawa mashoma uye saka zvakanaka kuti urangarire iwo matsva mabasa Makwikwi Ekuita uye otomatiki kudzidziswa kuona.
1 Zvemakwikwi Makwikwi
2 Otomatiki kudzidziswa kuona
Mune ino kesi, izvo zvatiinazvo idambudziko idzva kune vashandisi vanoita zvemuviri uye vanozvitarisa paApple smart wachi.Kuti uenderere mberi nekusimudzira Chiitiko Kugovana, watchOS 5 inobvumidza vashandisi kukoka vamwe varidzi veApple Watch kutora chikamu mumakwikwi emazuva manomwe echiitiko.
Sezvavanenge vachifambira mberi ivo vanowana mapoinzi ekuvhara iwo maringi ekuita uye ivo vanogashira zviziviso nemazano ekudzidzisa kuti vagare vachikurudzirwa uye kuti vhiki ipfuure. Vashandisi vanogona kupokana neshamwari inoshandisa Kugovera Chiitiko kumakwikwi emazuva manomwe uye nenzira iyi kurovedza muviri kunokurudzirwa imwezve poindi pakati pavo.
Otomatiki kudzidziswa kuona
Apple inowedzera chinonakidza chiitiko chekuti isu tichafanirwa kunyatsoona kushanda kwayo uye ndiko kuti iyo system inofanirwa kunyatsoita chaizvo kuti uone chaiyo chiitiko chemuviri panguva yatinotanga kuzviita, hazvina kukosha izvozvo Zvinoitika nemamwe mamita emabasa anotiudza kuti tiri kuchovha kana tiri kutenderera nemudhudhudhu. Ngatitarisirei kuti vagadzirise musoro uyu zvakanaka kuti vasave nematambudziko, chero zvodii inogona kumisikidzwa kana kuremedzwa nemaoko kuitira kuti isashande zvakanaka mune zvimwe zviitiko.
Kune anonyanya kufarirwa Apple Watch mashandiro uye ayo atinonyanya kushandisa mazuva ese, otomatiki kudzidziswa kuona kunotumira yambiro yekutanga yakakodzera kurovedza muviri uye inoita kuti iverenge zvichidzoka kumashure. Ichi chiitiko chinotumirawo chiyeuchidzo kupedzisa musangano mushure menguva yekusaita basa kana mushandisi akaikanganwa uye nekudaro inogona kuve nzira yakanaka yekurekodha kurovedza muviri kwatinoita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zvemakwikwi makwikwi uye otomatiki kudzidziswa kuona kweApple Watch
Zvitsva zvinouya kuAirPods, Rarama Teerera
Craig Federighi haaone chekubata bata pane maMac emangwana